Ithegi: emea | Martech Zone
Inkqubo ye2016 yeNkqubo yeNkqubo kunye noQikelelo
NgoLwesine, Aprili 28, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Sibhale malunga nokuba yeyiphi na intengiso yenkqubo esekupheleni konyaka ophelileyo kwaye senza udliwanondlebe olukhulu nengcali uPete Kluge ovela kwiAdobe ngesihloko. Icandelo lihamba ngokukhawuleza kombane. Andiqinisekanga ukuba iinkqubo zentengiso yemveli ezifuna ungenelelo olusebenzayo lokunyusa ziya kuhlala. Ngapha koko, inkcitho kwintengiso yenkqubo kulindeleke ukuba ithathe iipesenti ezingama-63 zentengiso yedijithali ngasekupheleni kwalo nyaka ngokweMarketer. Ukudityaniswa kwetekhnoloji yentengiso kunye nobugcisa bemar